महिनावारी हुँदा सरसफाइमा कसरी ध्यान दिने? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
महिनावारी स्वच्छता दिवस महिनावारी हुँदा सरसफाइमा कसरी ध्यान दिने?
कमला गुरुङ शनिबार, जेठ १४, २०७९, ०६:०२:००
काठमाडौं - सामान्यतया किशोरी अवस्थामा प्रवेश गरेपछि महिलाहरुमा महिनावारी चक्र सुरु हुन्छ। महिनावारी चक्र महिला अनुसार २१ देखि ३५ दिनको फरकमा हुने गर्छ।
महिनावारीको क्रममा महिलाहरुले सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडदेखि सरसफाइका क्रममा ध्यान नदिँदा यसले विभिन्न रोगको जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ।
यही विषयमा केन्द्रित रहेर स्टार अस्पतालकी कन्सल्टेन्ट प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा लक्ष्मी आचार्य गौतमसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
महिनावारी के हो ? महिनावारी सबै महिलामा फरक हुन्छ ?
– महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। जुन मासिक रुपमा हुने गर्छ।
– महिलाको वृद्धि विकासको क्रममा महिनावारी हुन्छ।
– महिनावारी प्रत्येक महिलामा फरक नहुनुपर्ने हो। तर शारीरिक अवस्था अनुसार महिलामा महिनावारी पनि फरक हुन सक्छ।
– महिनावारीका क्रममा कसैको धेरै कसैको थोरै रगत पनि बग्ने गर्छ।
– प्रत्येक महिलाको महिनावारीको क्रममा ६० देखि ८० एमएल रगत बग्नु सामान्य हो।
– हर्मोनल गडबढी, पाठेघरमा ट्युमर पलाउँदा पनि अनियमित महिनावारीको समस्या आउँछ।
– सामान्यतया २८ दिनको फरकमा हुने महिनावारी सामान्य अर्थात् नियमित हो।
– २१ देखि ३५ दिनको फरकमा हुने महिनावारीलाई पनि सामान्य मान्न सकिन्छ।
– तर २१ दिनभन्दा छिटो र ३५ दिनभन्दा ढिलो गरी भयो भने त्यसलाई अनियमित भनिन्छ।
– अनियमित महिनावारीको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्छ।
महिनावारीमा सरसफाइको के महत्व हुन्छ ?
– महिनावारीमा सरसफाइमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ।
– कतिपय युरोपियन देशहरुमा महिनावारी सरसफाइको विषयमा पाठ्यक्रम नै बनाएका हुन्छन्।
– महिनावारी हुँदा सरसफाइमा ध्यान दिँदा प्रजनन् स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ। विभिन्न रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ।
महिनावारी हुँदा सरसफाइमा कसरी ध्यान दिने ?
– महिनावारी हुँदा सेनिटेरी प्याड लगाउनु पहिले हात सफा गर्नुपर्छ।
– ४ देखि ६ घण्टाभित्रमा प्याड परिवर्तन गरिरहनु पर्छ।
– प्रयोग गरिएका प्याडलाई सही तरिकाले नष्ट गर्नुपर्छ।
– कपडाको प्याड प्रयोग गर्दा राम्रोसँग धुने र घाममा सुकाउनुपर्छ।
महिनावारी हुँदा कस्तो खानपान हुनुपर्छ ?
– महिनावारी हुँदा धेरैजसो महिलालाई पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने समस्या हुन्छ।
– शरीरबाट रगत बग्ने हुँदा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, झोलिलो तथा पोषिलो खाना गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा यहाँको सुझाव ?
– हाल अस्वस्थकर जीवनशैली विभिन्न कारण महिलाहरु छिटो महिनावारी हुन थालेका छन्।
– महिनवारी हुँदा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन मेरो सुझाव छ।
– महिनावारी के हो, प्याडको सही प्रयोग र खानपानसँग सम्बन्धित भिडियो मिन्स्ट्रोपेडिया पनि हेर्न सकिन्छ।